Igwe ọkụ ngwakọ mmiri ọ ga-ajụkwa ebe ndọba ụgbọala? – Wikipedikia Encyclopedia?
Nyere ikike ya imepụta ọkụ mmiri ma n’otu oge mma gbadata gị ụgbọala, niile mgbe ị na-azọpụta gị ego! Ngwakọ mmiri ọkụ bụ 3.5 ugboro ịrụ ọrụ nke ọma karịa ọkọlọtọ ọkọlọtọ mmiri ọkụ na ga- na-emepụta ihe dị ka 15% ọkụ karịa mmiri na elekere mbụ nke ojiji.
N'otu aka ahụ, ego ole ọkụ eletrik ka mgbapụta mmiri na-eji?
Ngwa eletriki Ejiji
Ahụkarị Oriri Oge Awa
Efu Kwa Oge (na 10 cents kwa kilowatt-hour)
Mmiri mmiri 3,000 watts 30 cents
Okpomoku di n’elu 1,500 watts 15 cents
Draya ntutu 1,200 watts 12 cents
Ọkụ eletrik na-ere ọkụ 1,000 watts 10 cents
Ọzọkwa, Kedu ihe kacha mma ngwakọ mmiri ọkụ ọkụ?
Nyocha 5 ngwakọ mmiri ọkụ kacha elu
#1 AO Smith GDV-50 Ebe obibi Natural Gas Water Heater.
GE GeoSpring - Igwe mmiri ọkụ eletrik Pro ngwakọ.
AO Smith – 50-Gallon Voltex Ebe obibi Hybrid Electric Heat Pump Water Heater.
HTP – RGH-100F Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ na-arụ ọrụ dị elu nke Crossover Hybrid.
28 Ajụjụ na Azịza Yiri nke Achọtara?
Kedu onye na-eme ngwakọ mmiri ọkụ kacha mma?
Rheem ka ọ bụ AO Smith ka mma?
Igwe ọkụ ngwakọ mmiri na-arụ ọrụ n'oge oyi?
Ego ole ka ọ na-eri iji wụnye ngwakọ mmiri ọkụ?
Kedu otu esi ejikọta igwe ọkụ mmiri ngwakọ?
Kwesịrị ịhapụ mmiri ọkụ mgbe niile?
Ngwakọ ọkụ mmiri ọkụ na-arụ ọrụ?
Kedu ụdị kpo oku kacha arụ ọrụ?
Kedu ihe bụ ọghọm nke igwe eji egwu mmiri?
Kedu ego ole eji eji dochie igwe na-ekpo ọkụ mmiri ọkụ?
Oghere ole ka ngwakọ mmiri ọkụ chọrọ?
Kedu ka ị ga-esi mara mgbe ikpo ọkụ gị na-apụ apụ?
Kedu ụzọ kachasị dị mma isi kpoo mmiri?
Ego ole ọkụ eletrik ka mgbapụta mmiri na-eji?
Kedu ụdị igwe kpo oku mmiri kachasị dị ntụkwasị obi?
Kedu ihe ndị na-ekpo ọkụ mmiri na-arụ ọrụ nke ọma?
Kedu ihe kacha mma ngwakọ mmiri ọkụ?
Kedu nha igwe ọkụ ka m chọrọ maka ụlọ m?
Kedu otu esi wụnye ngwakọ mmiri ọkụ?
Afọ ole ka igwe na-ekpo ọkụ mmiri na-ewe?
Yabụ na ọ bụghị naanị na ị ga-echekwa ego na ụgwọ ike gị, ị ga-enwekwa ike ịnye jụụ ikuku n'ime gị ụgbọala n'ụbọchị okpomọkụ ndị ahụ na-ekpo ọkụ! Ngwakọ mmiri ọkụ bụ 3.5 ugboro ịrụ ọrụ nke ọma karịa ọkọlọtọ ọkọlọtọ mmiri ọkụ na ga- na-emepụta ihe dị ka 15% ọkụ karịa mmiri na elekere mbụ nke ojiji.
Ngwakọ mmiri kacha mma - Nyocha
Ụlọ Westing 80 Gal. Igwe ọkụ eletrik.
Supergreen IR8000 Infrared Eletriki.
Ebighi-ebi BU195M Condensing Hybrid Heater.
Rheem bụ ezigbo, ọkara-larịị mmiri okpomọkụ ika nke ahụ abụghị oke ọnụ. Aha ya maka imepụta ihe na-adịgide adịgide, ndị na-ekpo ọkụ mmiri a pụrụ ịdabere na ya na-eme ka ọ bụrụ ezigbo nhọrọ maka ọtụtụ ụlọ. N'ozuzu, AO Smith ikekwe mma nhọrọ maka ndị na-ekpo ọkụ mmiri gas, mana ọ bụ naanị ntakịrị.
Heat mgbapụta mmiri heaters n'oge oyi
Ee, nke gi mmiri ọkụ A na-echekwa ya n'ime ụlọ, mana ọ na-adịkarị n'ime okpuru ulo ma ọ bụ ebe a na-adọba ụgbọala, ebe ụlọ ahụ na-adịghị ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ dị ka oghere ndị ọzọ. Ọ dị ka a okpomọkụ mgbapụta mmiri okpomọkụ ga- nwere oge isi ike eme ya ọrụ site na Illinois chilly oyi.
Ị ga-akwụ ụgwọ n'ihe dị ka $1,200 ruo $3,500 maka ọtụtụ ngwakọ okpomọkụ mgbapụta mmiri heaters. a price na-agụnye ma ihe na ọrụ. Ha bụ ụdị nchekwa tankị kachasị arụ ọrụ yana nke kachasị ọnụ.
Ma ọ bụrụ na ị chọrọ naanị a rụrụ atụmatụ nke ihe size ị chọrọ (na ngụkọta ngụkọta), soro ntuziaka ndị a: Maka mmadụ 1 ruo 2: 30-40 galọn. Maka mmadụ 2 ruo 3: 40-50 galọn. Maka mmadụ 3 ruo 4: 50-60 galọn.
Ọ ka mma ahapụ na mmiri ọkụ kpo oku na mgbe niile, kama ịgbanwuo ya ma gbanyụọ. Nke a bụ akụkọ ifo a na-ahụkarị. Ị nwere ike iji oge iji kpoo gị ọkụ mmiri maka otu awa ma ọ bụ abụọ kwa ụbọchị tupu ị na-achọkarị mmiri ọkụ maka baths ma ọ bụ mmiri ozuzo.
Ngwakọta mmiri ọkụ nwụnye
n'ihi na ngwakọ heaters dọpụta okpomọkụ site na ikuku, ha dabara nke ọma maka ihu igwe na-ekpo ọkụ dị ka Florida. Ngwakọ heaters eme ọ bụghị ọrụ rụọ ọrụ nke ọma na oghere dị jụụ, ya mere a na-etinyekarị ya n'ime ụlọ nke nwere oke okpomọkụ, dị ka ụlọ ọkụ ọkụ ma ọ bụ ebe nchekwa ụgbọala.
Usoro geothermal na-enye ụdị kpo oku kacha arụ ọrụ. Ha nwere ike belata kpo oku ụgwọ ruru pasentị iri asaa.
Ndị na-ekpo ọkụ mmiri na-enweghị mmiri mepụta ọkụ na-adịghị agwụ agwụ mmiri, weghara ohere, nwee nsogbu dị egwu nke ịgba mmiri, dị nchebe, ma nwee ogologo ndụ ogologo na nkezi. Isi ọghọm nke tankị mmiri na-enweghị mmiri bụ ụgwọ ha na-akwụ ụgwọ (otu na ntinye) dị elu karịa ụdị tankị ndị na-ekpo ọkụ.
HPWHs n'ozuzu achọrọ echichi na a ụlọ nwere 1,000 cubic ụkwụ ohere nke mere na ezuru ambient ikuku dị maka mmiri ọkụ iji rụọ ọrụ nke ọma. Ọ bụrụ na ị mkpa ịkwaga gị mmiri Sistemụ kpo oku iji nweta nke a, jụọ onye nrụpụta gị ka o mee ka ị mara ihe ga- sonye aka.
Na mba, ndị nkezi na-eri of ntinye a mmiri ọkụ àmà site $ 500 ka $ 1,000 dabere na ụdị na size nke mmiri ọkụ (tụrụ na galọn) na ọnụego nke onye nhazi ahụ. Ntinye mmiri na-ekpo ọkụ mmiri a na-eme nke abụọ n'akụkụ: a -eri nke ngwa oru na -eri nke oru.
Ndị a bụ ụfọdụ ihe ngosi ole na ole na-egosi na igwe mmiri ọkụ gị anaghị arụ ọrụ nke ọma ma yikarịrị ka ọ chọrọ ọrụ.
Mmiri Na-adịghị Mma.
Okpomọkụ na-ekwekọghị ekwekọ.
Mmiri Na-adịru Ebighị Ebi na-ekpo ọkụ.
Ihe Na-aga Kwụsị N'abalị: Mmiri Na-ekpo Mmiri Gị.
Ngwakọta ngwa ngwa ọgbara ọhụrụ, nke na-enye ọkụ ozugbo mmiri, a na-ewerekarị dị ka ike karịa oru oma karịa 'echekwara' na-ekpo ọkụ mmiri usoro. Ị nwere ike ịwụnye anyanwụ mmiri kpo oku (SWH), nke a makwaara dị ka ọkụ anyanwụ mmiri (SHW).
N'ikwu okwu n'ozuzu, igwe ọkụ combi ọgbara ọhụrụ na-enwekwu ume.oru oma karịa ọkụ mmiri usoro ikpo ọkụ na tank ma ọ bụ olulu mmiri. E nwere ọtụtụ ndị ọzọ ụzọ of mmiri kpo oku, gụnyere anyanwụ na-ekpo ọkụ mmiri Sistemu, igwe ọkụ imi, eletriki mmiri ndị na-ekpo ọkụ, ọkụ eletrik na, n'ezie, kettles.
Mostdị Mmiri A Pụrụ Rtụkwasị Obi Ahịa
Mmiri Rheem Mmiri.
AO Smith Mmiri mmiri.
Bradford White Mmiri ọkụ.
Rinnai Mmiri mmiri.
Ecosmart tank mmiri mmiri.
GE GeoSpring Mmiri mmiri.
Stiebel Eltron Mmiri mmiri.
Ma ọ bụrụ naanị mkpa atụmatụ efu nke kedu oke ị mkpa (na ngụkọta ngụkọta), soro ntuziaka ndị a: Maka mmadụ 1 ruo 2: galọn 30-40. Maka mmadụ 2 ruo 3: galọn 40-50. Maka mmadụ 3 ruo 4: galọn 50-60.
Kenmore Mmiri na-ekpo ọkụ.
American Standard Water hita.
Usoro geothermal na-enye arụ ọrụ nke ọma ụdị kpo oku. Ha nwere ike belata kpo oku ụgwọ ruru pasentị iri asaa.
Tupu ị Wụnye Igwe ọkụ mmiri Hybrid ọhụrụ gị.
Nzọụkwụ 2 - Gbanyụọ Valves.
Nzọụkwụ 3 - Tọọ ihe ọkụ mmiri na ebe.
Nzọụkwụ 4 - Jikọọ Fittings.
Nzọụkwụ 5 - Jikọọ ihe na-enye mmiri.
Kwụpụ 6 – Wụnye ahịrị ịgbapu mmiri.
Nzọụkwụ 7 - Jupụta tank.
Nzọụkwụ 10 - Ntọala ikpeazụ.
The Kacha Oru oma Water hita E Nwere — Rheem® Ngwakọ eletriki Igwe mmiri- onye mara ihe, dị jụụ na akụrụngwa mmiri kachasị arụ ọrụ n'ụwa, na-akwụ ụgwọ maka onwe ya ihe ruru $4,750 in ike -eri ego ihe karịrị afọ 10.
Ọ ka mma ahapụ na mmiri ọkụ kpo oku na mgbe niile, kama ịgbanwuo ya ma gbanyụọ. Ọ bụrụhaala na tank ahụ nwere jaket mkpuchi dị mma, ọ ga-edobe ya mmiri na-ekpo ọkụ niile ụbọchị, na-enweghị mkpa ka a na-emegharị ya oge niile.
Nlebanya igwe mmiri 3 kacha mma nke 2019
Ebe obibi 50 Galọn Voltex – Ngwakọ ọkụ eletrik kacha mma na-ekpo ọkụ mmiri mmiri.
American Water Heater Company GH-90N/APPGH90N 100,000 BTU - Ngwakọ Ngwakọ Eke Gas kacha mma obibi mmiri mmiri.
Kedu ihe dị iche n'etiti ịkụ na ịgwakọta?